Mune ino kosi yakanzi chiGerman Perfekt hurukuro, isu tichapa pfupiso ruzivo nezve perfekt nguva muchiGerman.
Takazviona kare, Perfekt zvinoreva nguva yakapfuura ne -di sePräteritum. Sezvaunoziva, mitsara yenguva yakapfuura inotsanangura zviito zvakaitwa uye zvakapedzwa kare.
Takaita chidzidzo chakadzama uye chakatsanangurwa pa perfekt muchiGerman zvisati zvaitika, kana iwe uchida kuongorora icho chinyorwa, tinya apa German Perfekt
Sezvambotaurwa, pane mimwe misiyano pakati pePerfekt nePräteritum muchiGerman; Präteritum inowanzo shandiswa mumutauro wakanyorwa, inoshandiswa muzvidimikira, inoshandiswa zvakanyanya mungano, nganonyorwa kana nyaya, Perfekt inoshandiswa mumitauro inowirirana, kwete mumabasa akaita semanovelisi nenyaya.
Idzi nguva mbiri dzinogona kureva pese pakare tension zvichienderana nenzvimbo, kunze kwenguva yapfuura.
Semuenzaniso, vanogona kuwana nguva dzesimba sekushanda kwaita ”,“ akashanda ”,“ achishanda ”, asi haashandisirwe miş yakashanda”, ım yakashanda ”nguva.
ChiGerman perfekt chiito conjugation
chijerman perfekt chiito conjugation
chiJerimani perfekt maito
Muchikamu chekutanga (kuruboshwe kwekupedzisira) chematafura ari pamusoro, chimiro chekusingaperi chechiito chinopihwa, muchikamu chechipiri chiito chinonzi Partizip Perfekt, ichi chikamu chinoshandiswa kugadzira chirevo muPerfekt nguva. Partizip Perfekt yechiito chega chega chinofanira kuyeukwa. Muchikamu chechitatu kubva kuruboshwe, chiTurkey chakaenzana neshoko chinopihwa.Kumugumo wekupedzisira, chiito chekubatsira chinoshandiswa neshoko iri chinoratidzwa.
MuPerfekt, kazhinji izwi rinobatsira "haben" rinoshandiswa, takaedza kududza zvese zviito zvisina kujairika zvinoshandiswa ne "sein" pamusoro. Naizvozvo, zvingangove zvirinani kushandisa haben nechiito chisina kuiswa mutafura iri pamusoro.
Kuti uwane rumwe ruzivo rwehurukuro German Perfekt Tarisa musoro wenyaya wedu unonzi.
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi gumi nemaviri yapfuura, musi wa11 Zvita 27, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa musi wa2020 Zvita 27.
Tags: ChiGerman perfekt chiito conjugation, German perfekt lecture, chiJerimani perkeft zviito